ဂျူနီယာဝင်း – မစ်ဇူရီက ကောင်ကလေးတယောက် သုို့မဟုတ် “၀ီနာ လျောက်သောလမ်း“ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒေါက်တာဓမ္မပိယ(ITBMU) - အမြင်မတူတဲ့အတွေးများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို မည်သို့ တည်ဆောက်ကြမည်နည်း
မောင်ရစ် - သူများတို့ ချစ်ခြင်းကို မခွဲတော့ဘူးဆိုတဲ့ အမေရိကန်ပြည်
ချစ်သူများနေ့ အတွေးများ (Ashin Nanda Wuntha)
(အတွေးအမြင် ၃၁၉ ။ မတ်လ ၂၀၁၉)
မိုးမခ၊ မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၉
(2001 ခုနှစ်ထုတ် M. Mitchell Waldrop (အမ် မီချယ် ၀ါလ့်ဒရော့) ရေးသားသော The Dream Machine မှ Missouri Boys အခန်းမှ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော The Wienerweg အခန်းကို ဘာသာပြန် ထားပါတယ်။ J.C.R. Licklider နဲ့ သူ့ရဲ့ ပါစင်နယ်ကွန်ပြူတာ နည်းပညာတော်လှန်ရေး အကြောင်း ဆုိုပါတော့လုို့စာအုပ်မှာ ကြော်ငြာထားပါတယ်။)
(Dream Machine “အိပ်မက်ထဲကစက်ပစ္စည်း“ အမည်နဲ့ သည်စာအုပ်ကို မိတ်ဆက်ထားခဲ့ပီးပါပီ။ “မစ်ဇူရီကကောင်ကလေး“ အခန်းမှာ Joseph Carl Robnett Licklider (J.C.R Licklider) (March 11, 1915 – June 26, 1990) ဂျူးဆက် ကားလ် ရော့ဘ်နက် လစ်ကလီဒါ (အတိုကောက် J.C.R ဒါမှမဟုတ်) ‘Lick’ လစ် ကိုမိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ သူ့မိသားစုတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးထားတယ်။ သူဟာ ဒေါက်တာဘွဲ့ရပီးလို့ သူ့ဘ၀ကို ထိမ်းကျောင်းတော့မယ့်အချိန် ၁၉၄၂ ကာလတွေမှာ မလွဲသာမရှောင်သာ ကမ္ဘာစစ်ကြီးနဲ့ တုိုးခဲ့တယ်။ တတိယအပုိုင်းမှာ “ငရဲခန်းတဖြစ်လဲ အလုပ်ခန်း“ အခန်းမှာ လစ် ဟာ စစ်အတွင်း သူ့အလုပ်တွေကုို မရပ်မနားလုပ်ခဲ့၊ သူအိမ်ထောင်ကျခဲ့၊ နောက်တော့ ပညာရှာတဲ့နေရာမှာ လောဘကြီးကြီးရှာခဲ့တာမှာ ယခု ရောက်ရှိနေတဲ့ ကန်းဘရစ်ကနေ ၂မိုင်အကွာက မက်ဆက်ချူးဆက် စက်မူတက္ကသိုလ် Massachusetts Institute of Technology (MIT) (အမ် အုိုင် တီ) က သူ့ကို ပညာတွေသင်ပေးမယ့်သူတွေရှိရာအရပ်သို့ တပည့်ခံရန် သွားခဲ့ပါတော့တယ် ဆုိုပီး အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။
အခုအပိုင်းက အဲသည်ရဲ့အဆက် အမ်အုိုင်တီ ကုိုရောက်လာတဲ့ လစ် အကြောင်းတွေ လို့ စာဖတ်သူများ ထင်ရင် မှားသွားလိမ့်မယ်။ ဘာသာပြန်သူက ကျော်လုိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အတုိုင်းပါပဲ။ လစ် ရောက်လာမယ့် အမ်အုိုင်တီ မှာ ရောက်နှင့်နေတဲ့ ပညာရှင်တွေ အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် ထဲက မစ်ဇူရီ အရပ်က ကောင်ကလေး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Wiener (၀ီနာ) ရဲ့ အကြောင်းတွေ အများကြီး မိတ်ဆက်ပေးထားတယ်။ စာရေးဆရာရဲ့ စတုိုင်အတုိုင်း ဘာသာပြန်တင်ဆက်ထားတာပါ။ ခံစားကြည့်တာပေါ့။)
ဟားဗက်ကနေ အမ်အိုင်တီ ကိုသွားတဲ့ လမ်းဟာဖြင့်ရင် စစ်ကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့တွေမှာဖြစ်လို့ တကယ့်ကို ပြောစမှတ်တွင်လောက်မှာပဲ။ ဟားဗက် – လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀၀ကျော်လောက်က ရှိခဲ့ပီးသား၊ တွေ့ရှိပီးသားနေနရာတစ်ခု။ ကမ်းဘရစ်ရဲ့ အရှေ့ဘက်ခြမ်း။ သစ်ပင်တွေ၊ တောအိမ်ကလေးတွေ၊ စာအုပ်ဆိုင်လေးတွေနဲ့ နေလို့ကောင်းမယ့် နေရာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲ။ ဒါပေမယ့် အဲသည်ဒေသက အမ်အိုင်တီ ဆိုတဲ့ ၁၈၆၁ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ မက်စက်ချူးစက် စက်မူတက္ကသိုလ် ကတော့ ဒေသရဲ့ အရှေ့ဖက်က စက်မူဇုံကွင်းပြင်တစ်ခုသာသာ။ အနီရောင်ကျောက်တုံးကျောက်ခဲတွေနဲ့ စက်မူကျောင်းလေးတစ်ခု။ အဓိက ကျေင်းတော်ကြီးကတော့ သူ့အရည်အချင်းတွေနဲ့ သူ့ဘာသာသူ လုံလောက်ပါတယ်။
ဘော့စတွန်အတွက်လှပတဲ့ နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ ချားစ်မြစ်စီးဆင်းရာကို သူ့ဆီက မြက်ခင်းပြင်လေး လှိမ့်ဆင်းသွားပုံက ကဗျာဆန်ဆန်။ သို့သော်လည်း စစ်အတွင်းတုန်းက M. I. T (အမ်အိုင်တီ) ရဲ့အစကတော့ Radiation Laboratory (ဓါတ်ရောင်ခြည် ဓါတ်ခွဲခန်း) ဆိုတဲ့ ထိတ်တန်းလျိူ့ဝှက် ဂေဟာတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့။ အဲသည်မှာ ရူပဗေဒပညာရှင်နဲ့ အင်ဂျင်နီယာ ၄ထောင်ကျော် ဟာ ဓါတ်ရောင်ခြည်ဆိုင်ရာ နည်းပညာကို အကြီးအကျယ် သပ်သပ်ရပ်ရပ် နဲ့ အပြင်းအထန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြဖူးတယ်။ အဲသည်အရပ်ဟာ သူတို့အတွက် အိမ်ဂေဟာဖြစ်ခဲ့၊ သည်လိုနဲ့ အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ သူတို့အလုပ် ဖြန့်ကျက်ရာဖြစ်ခဲ့၊ အကျဉ်းတန်အရုပ်ဆိုးတဲ့ ဓါတ်ခွဲအဆောက်အဦတွေ ဖြစ်လာခဲ့၊ တိုးချဲ့ခဲ့ တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ စစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကတောင် အဲသည်ဧရိယာဟာ ခြောက်သွေ့တဲ့ ကုန်လှောင်ရုံတွေ၊ စက်ရုံတွေနဲ့ စက်မူလုပ်ငန်းတွေ နဲ့ ပြည့်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုတောင် သည်နေရာက ပိုပီး ခြောက်သွေ့နေပါသတဲ့။
အခု လစ်ရဲ့ ဟားဗက်ကနေ အမ်အိုင်တီ ခရီးကို ပြန်စရရင် နောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားပါပီ။ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက… အဲသည် တက္ကသိုလ်ကြီးဟာ စက်မူကျောင်းလေးတစ်ကျောင်း သာဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်ထက်ပိုလည်းမပိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာတော့ ရူပဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ ဥက္ကဌအလုပ်ကို လုပ်နေသူလည်းဖြစ်တဲ့ ကားလ် သွန်ပ်ဆင် ရဲ့ လက်အောက်မှာ အမ်အိုင်တီဟာ ရူပဗေဒ၊ ဓါတုဗေဒ၊ သချာင်္၊ အာခီနဲ့ တခြားသော ဘာသာရပ်တွေရဲ့ အဓိက သင်တန်းများပို့ချရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
တဖန် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးက ၀င်ရောက် နှောက်ယှက်လိုက်ပြန်တော့ အစိုးရက ဓါတ်ရောင်ခြည်ဆိုင်ရာ သုတေသနခန်း၊၊ ဓါတ်ခွဲခန်း၊ စက်မူပိုင်ဆိုင်ရာ ဓါတ်ခွဲခန်း၊ အရေးပါသော အဆင့်မြင့် ဓတ်ခွဲခန်းတွေ အတွက်ဒေါ်လာ သန်း ၁၁၇ သန်းမြုတ်နှံလိုက်တယ်။ သည်တော့ အမ်အိုင်တီဟာ ရှေ့မှာဆိုခဲ့သလို သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေ ရှိရာနေရာဒေသဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၄၅ခုနှစ်မှာ ကမ်းဘရစ် အရှေ့အရပ်ဟာ စွမ်းအင်ဗေဒဆိုင်ရာဘာသာမှာ ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ နေရာဒေသဖြစ်လာတယ်။ စစ်အတွင်းကာလတွေမှာ ရူပဗေဒပညာရှင်တွေ ဟာ စိတ်ပညာဗေဒပညာရှင်တွေနဲ့ လက်တွဲပြီး အလုပ်တွေ တရစပ်လုပ်နေရတယ် ဆိုတာ ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။
သည်လုိုပေါ့ … ရူပဗေဒပညာရှင်တွေက စိတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ တဖက်တချက်အလုပ်တွဲလုပ်တယ်၊ စိတ်ပညာရှင်တွေက သချာင်္ပညာရှင်တွေဆီကနေ သင်ယူလေ့လာတယ်၊ သချာင်္ပညာရှင်တွေက လျပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကုို သူတုို့ဘာသာဗေဒနဲ့ ကျယ်ပြန့်အောင်လုပ်တယ်။ အဲသည် ၄နှစ်ဆုိုတဲ့ ကာလ၊ ၄နှစ်တာဆုိုတဲ့ အတွင်းမှာ သူတုို့ဟာ စကားတွေပြောကြ၊ ငြင်းခုန်ကြ၊ တုိုက်ခုိုက်ကြ၊ ဖန်တီးကျတယ်ပေါ့။ ဟော … သည်လုိုနဲ့ သူတုို့ဟာ အကြံညဏ်သစ်တွေနဲ့၊ စိတ်ကူးသစ်တွေနဲ့ ၊ နည်းပညာအသစ်တွေနဲ့ ၊ နည်းလမ်းအသစ်တွေနဲ့ သူတုို့တတွေဟာ အသက်ဝင်လာတယ်၊ ကမ္ဘာကြီးကုို အမြင်သစ်တွေနဲ့ ကြည့်လာကြတယ် ဆုိုပါတော့လေ။
(သည်နေရာမှာ လူတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်။) သည်နေရာကုို ပညာရှင် တစ်ယောက် – လူပုံက ခပ်ကြွားကြွား၊၊ ၀တ်စုံပြည့်နဲ့ ဘာနဲ့ညာနဲ့၊ လက်မှာ ဆေးပေါ့လိပ်ကြီးကို ဟန်ပါပါညှပ်လုို့ အမ်အုိုင်တီ ပရ၀ဏ်ထဲကုို ဟုိုငေးသည်ငေးနဲ့ ရောက်လာတယ်ပေါ့။ သူလမ်းလျောက်လာပုံနဲ့ ဟန်ပန်ကုို ကြည့်လိုက်တော့ ဘဲငန်းတစ်ကောင် ကနွဲ့ကလျ လျောက်လာသလုိုလုို။ ပြောရရင် သူ့ရဲ့ အနက်ရောင်ဘောင် မျက်မှန်ထူထူနက်ကြီးနဲ့ သူ့ပုံကုိုက အဲသည်ခေတ် သတင်းထောက်တွေက သူ့ကုို ခရစ်စမတ်ဘုိုးဘုိုးကြီး စင်တာကလော့ လို့ ခေါ်လိုက်မှာ သေချာတယ်။ ဒါပေမယ့် ယနေ့ခေတ် သတင်းထောက်တွေဆုိုရင်တော့ သူ့ကုို ချက်ချင်းကြီးကုို (KFC)ကေဖက်စီ ကင်တာကီ ကြက်ကျော် လုို့ခေါ်မှာ။
Norbert Wiener (နော်ဘတ် ၀ီနာ) က တပါးသူရဲ့ ရုံးခန်းထဲကုို မကြေငြာပဲ ၀င်လာခဲ့ပီး “ဘယ်နဲ့လဲ ဟေ့” လို့ ခရီးရောက်မဆုိုက်မေးလုိုက်တယ်။ သူက အဖြေကုို မစောင့်ပဲ သူဆွေးနွေးလုိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကုို တပ်ပီး ပြောတယ်ဆုိုတယ်ပေါ့။ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောဆုိုင်ရာ ရောဂါဗေဒကို သချာင်္အမြင်နဲ့ ဆွေးနွေးတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးဆုိုင်ရာ ပညာရပ်ကုို စိတ်ကူးနဲ့ သူပြောချင်တာတွေ ပြောတယ်။ သက်မဲ့စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လုို့ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ ဆုိုတာကို သူ့အမြင်တွေတင်ပြတယ်။ မေးခွန်းထုတ်တယ်။ သူက တကုိုယ်တော်ပြောသွားတာတွေ။ အဲဒါတွေက တကယ့်ကုို ချီးကျူးလောက်တဲ့ စကားတွေပါ။ Robert Fano (ရောဘတ် ဖနုို) (သူက အမ်အုိုင်တီက သိပ္ဗပညာရှင်၊ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ပါမောက္ခ) က စစ်ပြီးသွားတာတောင် နော်ဘတ်ဝီနာ ရဲ့စကားတွေကုို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောမဆုံးဖြစ်တုန်း၊ မမေ့နုိုင်ဖြစ်တုန်းပါ။ ဖနုိုဟာ စစ်ပြီးသွားတော့ သူ့ရဲ့လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘာသာ ဒေါက်တာဘွဲ့ နဲ့ ဆက်လက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ၀ီနာ ပြောတဲ့စကားတခွန်း “အချက်အလက်တွေဟာ အမြဲတန်း ပြောင်းလဲနေတယ်“ ဆုိုတာကုို သူ့ဆီက အမြဲကြားကြရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖနို နဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပုိုင်း နောက်ထပ် စကားအဆန်းတွေ ထပ်မကြားရတော့ဘူး။ ဖနိုဟာ ၀ီနာ ပြောတဲ့အတုိုင်း စီမံပေးတယ်။ သူ့ရဲ့အချက်အလက်ဆုိုင်ရာ သီအုိုရီတွေကုိုလည်း အသစ်ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးတယ်။
အဲသည် ၀ီနာ ဆုိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ နံမယ်ကြီး စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေပေါ် မှာအခြေခံလို့ “၀ီနာ လျောက်သောလမ်း“ ဆုိုပီး Wienerweg ဆုိုတဲ့စကားလုံး အသစ်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ အဲဒါက ဂျာမန်လိုရေးထားတာပါ။ အင်္ဂလိပ်လုိုဆုိုရင် ‘Wiener’s path’ ဆိုပီး ဖြစ်ပါတယ်။ (အဲဒါ အခုဆောင်းပါးရဲ့ မူရင်း ခေါင်းစဉ်ပါ။) သူနဲ့စကားပြောဖူးသူတွေ၊ သူ့စကားတွေ နားထောင်ဖူးသူတွေ၊ သူ့တရားနာဘူးသူတွေ ကောင်းကောင်း သိပါတယ်။ “သူက အဲသည်နေရာမှာ ဘယ်သူတွေပဲ ရှိရှိ မရှိရှိ ၀င်ချလာတယ်၊ သူက ဘာကိုမှ ဂရုမစုိုက်ပဲ တန်းပီး ပြောတော့တာ၊ သူများက စကားပြောနေသလား ဘာလားကအစ ကြည့်မနေဘူး၊ တန်းပီး စပြောတော့တာပဲ။“ နောက်ပုိုင်း အမ်အုိုင်တီက ဥက္ကဌ ဖြစ်လာမယ့် Jerome Wiesner (ဂျေရုန်း ၀က်စ်နာ)က “သူက အပြောနဲ့ အရေးကို တပြိုင်နက်ထဲ လုပ်သွားတာပဲ။ သိပ္ဗံပညာရပ်ကုို အသေအချာ ဆွေးနွေးပြနုိုင်သူ တစ်ယောက်ပါပဲ” လုို့ ကျေကျေနပ်နပ် ပြောခဲ့ပါတယ်။
၀ီနာ ဟာ အမ်အုိုင်တီ မှာ တကယ်ပဲ သြဇာသက်ရောက်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်။ သူ့ရဲ့ အကြံသစ်ဥာဏ်သစ်တွေက တကယ်ပဲ ထိရောက်ပါတယ်။ ( သူက ၁၈၉၄ ဖွားဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၄ မှာ ကွယ်လွန်တယ်။) သူဟာ တက္ကသိုလ်စတက်ချိန် အသက်၁၁နှစ် ၁၉၀၅ ခုနှစ် ကတည်းကနေ နောက်အနှစ် ၄၀ လောက် အလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့တယ်လုို့ ဆုိုပါတယ်။ တကယ့်ကုို အရှားပါးဆုံး သတ္တ၀ါကြီးပါပဲ။ သူ့ရဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ သူ့ဆေးပေါ့လိပ်ကြီးကြောင့်လုို့ပဲ ဆုိုဆုို၊ သူက ဥရောပသားတစ်ယောက်နဲ့ ပဲတူတယ်။ သူ့အသံထွက်က ဥရောပဆန်တယ်၊ သူ့အမည်ကုို သူက ဗီယက်နမ်သံနဲ့ ထွက်တယ် – ဥပမာ ဗီယက်နမ် လုို ဗီ..နာ (ဗီးးးး နာ လုို့ထွက်သလုိုမျိူး) ကုို သူ့အမည် ၀ီးးးးးး…နာ လို့ ထွက်တယ်ပေါ့။ သူက အမှန်တော့ အမေရိကန်မူရင်းအသံထွက်သမားပါ။
နည်းပညာပုိုင်းဆုိုင်ရာအနေနဲ့ သူ့ကုို မိတ်ဆက်ရရင်တော့ သူက မစ်ဇူရီက ကောင်ကလေးတစ်ယောက်ပါပဲ။ မစ်ဇူရီအရပ်မှာ ၁၈၉၄ခုနှစ် နုိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်ဖွားပါ။ သူ့ဖခင်က ရုရှလူမျိူး လီယုို တဲ့။ ကုိုလန်ဘီယာတက္ကသိုလ်မှာ ဂျာမန်ဘာသာသင်ကြားသူ။ သူ့မိသားစုက ၁၈၉၅မှာ မက်ဆက်ချူးဆက် ကန်းဘရစ်ကုို ပြောင်းရွေ့လာကြတယ်။ လီယုို ၀ီနာ (နော်ဘတ်ဝီနာ၏ ဖခင်) က တကယ့်ကုို ထူးချွန်တဲ့ပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ သိပ္ဗံနဲ့ သချာင်္ ကုိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိထားတယ်။ ဘာသာစကား ၄၀လောက်နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေကုို ဖတ်တတ်တယ်။ ဟားဗက်မှာ ဘာသာစကားများဆုိုင်ရာတွေနဲ့ ပတ်သက်လုို့ ပါမောက္ခအဖြစ် အမူထမ်းခဲ့တယ်။ သူက သဘာတရားကုို အလေးထားသူ။ ဒါ့အပြင် အင်ဂျင်နီယာပညာကုိုလည်း စနစ်တကျ လေ့လာဘူးသူ။
သည်တော့ သည်အဖေက သူ့သားကုို ဘယ်လုိုပညာရေးမျိူးကုို ပေးမလဲ။ နုိုဘတ် အသက်၆နှစ်အရွယ်ထဲက ဖခင်ရဲ့ လျေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမူ အောက်မှာ ကြီးပြင်းလာလုိုက်တာ သူကလည်း အလုိုကျ လေ့လာလုိုက်စားခဲ့တော့ မိဘတွေအတွက် ချစ်စရာသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာ မဆန်းဘူးပေါ့။ သူကျေင်းစနေတော့ သူ့အသိပညာက ရွယ်တူတွေထက် ၇နှစ်လောက် ရှေ့ရောက်နေရော။ အသက် ၁၁နှစ်မှာ တက်ဖ်တက္ကသိုလ်ကို တက်လှမ်းခဲ့ရပီ။ ၁၉၁၃ခုနှစ် အသက် ၁၈နှစ်မှာ ဟားဗက်ကပေးတဲ့ သချာင်္ဘာသာနဲ့ သူက ဒေါက်တာဘွဲ့ရ။ ၁၉၁၇တုိုင် ပထမကမ္ဘာစစ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်တုိုင် သူက ကန်းဘရစ်၊ ကုိုလန်ဘီယာ၊ ဂေါ့တီဂန်၊ ကောနယ်၊ ကုိုဘန်ဟေဂန် အစရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဒေါက်တာပူပူနွေးနွေးက အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရာမှာ ဆင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ စ်ိတ်ပညာဗေဒ-သချာင်္ပညာရှင် ဘာထရန်ရူဆယ်တုို့၊ ဂျာမန်သချာင်္ပညာရှင်ကြီး ဒေးဗစ်ဟားဗက်တုို့နဲ့ တွဲပြီးလုပ်ခဲ့ရပါသတဲ့။ ၁၉၁၈ခုနှစ် ဟာဖြင့် မျော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့၊ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းဖွယ် ကာလတွေဖြစ်နေတာတော်င် အဲသည် မျိူးချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့ အဲသည် အသက်၂၄နှစ်အရွယ် ကောင်ကလေးက မေရီလန်းက စစ်ဘက်ဆုိုင်ရာနယ်မြေအတွက် သူ့သချာင်္စွမ်းရည်တွေနဲ့ အလုပ်အကြွေးပြုခဲ့သေးတယ်။ သူ့က စစ်လက်နက်ကြီးတွေရဲ့ ပစ်မှတ်ပုိုင်းဆုိုင်ရာတွေကုို လက်နဲ့ အသေအချာ တွက်ချက်ပြခဲ့ပါသတဲ့။ ၁၉၂၀ခုနှစ် ဘော့စတွန်ဟားရယ် ဆုိုတဲ့ သတင်းစာအတွက် ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်အဖြစ် နည်းနည်းပါးပါး ၀င်လုပ်ခဲ့ပီးတဲ့နောက် အမ်အုိုင်တီမှာ သချာင်္ဘာသာရပ်ဆုိုင်ရာ အဖြစ် အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အမ်အုိုင်တီမှာ သချာင်္ဘာသာရပ်ကုို အင်ဂျင်နီယာကျေင်းသားတွေကုို အဓိကထား သင်ပေးတယ်။ ၀ီနာရဲ့ သချာင်္ဘာသာရပ်ဆုိုင်ရာ သင်ကြားမူပုံစံဟာဖြင့် ဒဏာရီဆန်ဆန်ပဲလုို့ ပြောကြဆုိုကြတာ ကြားဖူးပါရဲ့။ ၀ီနာ တိုင်းတာမူ၊ ၀ီနာ လုပ်ငန်းစဉ်၊ ၀ီနာ ညီမျှခြင်း၊ ပါလီ-၀ီနာ သီအုိုရမ်များ၊ ၀ီနာ လီနီယာအီကွေးရှင်း၊ ၀ီနာ အနာလစ်ဆစ် စသဖြင့် စသဖြင့်။ သူက သူ့မြင်မြင်သမျှဟာ သချာင်္ကြီးပါပဲ။ သူ့မျက်စိထဲ သချာင်္ပဲမြင်နေတော့တယ်။ ၁၉၂၀ နဲ့၁၉၃၀နှစ်တွေမှာ ကွန်တန်သီအုိုရီနဲ့ပတ်သက်လုို့ တိုးတက်မူတွေကို သူပဲ ချပြခဲ့တယ်။ သူ့အဖော်တွေကတော့ သူလုပ်သမျှ သူ့စတုိုင်တွေကုို လက်ကော ခေါင်းရော ခါကြရပါသတဲ့။ ၀ီနာက သချာင်္အမှတ်အသားတွေ၊ သင်္ကေတတွေ၊ ဘာသာစကားတွေကနေ အကြံဥာဏ်အသစ်တွေ မွေးဖွားသန့်စင်ပေးဖုို့ ဒါပဲစဉ်းစားတွေးခေါ်နေတော့တာ။
သူက နည်းနည်းတော့ အဲ…. များများတော့ ကုိုးယိုးကားယားနုိုင်တယ်။ မှတ်မိသလောက် ပြောရရင် သူ့မျက်မှန်ကြီးက တော်တော်ထူတယ်။ သည်တော့ တခါတလေကျ ဘယ်ဟာက ဘယ်မှာဆုိုတာ သူမသိဘူး။ (မမြင်ဘူး)။ သည်တော့ ဆုိုလိုတာက စိတ်မှန်းနဲ့ သူက ကုိုင်တွယ် အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့။ သူများတကာတွေ ဟောပြောနေချိန်မှာ သူက ဟောက်နေတတ်တာတော့ လွန်တာပေါ့။ အပြီးသတ်ကျ သူက နိုးလာပီးတော့ မေးခွန်းတွေ တရစပ်ကောက်မေးတာမျိူး။ တနေ့ကလည်း သူက စာသင်ခန်းရှိရာကုို ငေးမောရင်း တွေးရင်းလျောက်လာတယ်။ နံရံတလျောက်မှာ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေက လိုက်ပြေးနေတယ်။ သူ့စာသင်ခန်းတံခါးက ဖွင့်ထားတဲ့တံခါးနား ရောက်လာတယ်။ အဲဒါကုို သူကဆက်ပီးအခန်းထဲက နံရံလေးဘက်အတုိုင်း အဲသည်လုို လက်ချောင်းလေးတွေ နံရံတလျောက် လုိုက်ပါရင်း ဆက်လျောက်သွားလုိုက်တာ တံခါးပေါက်ဆီပြန်ရောက်လာပီး ပြန်ထွက်သွားတယ်။ သူ့အတွေးတွေထဲ နစ်နေပုံများ။ တခါတုန်းကသူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ လမ်းမှာတွေ့တယ်။ စကားတပြောပြောနဲ့ လျောက်လာကြပြီး သူ့သူငယ်ချင်းကုို သူက အခုနတုန်းက သူဘယ်ဘက်ကုို သွားမလုို့ လုပ်နေတာလဲ လို့တွေ့တုန်းက အခြေအနေကို မေးသတဲ့။ ခုနတုန်းကတော့ ဘာသာရပ်ဆုိုင်ရာ ပြခန်းကနေ ထွက်လာတာလုို့ဆုိုတော့ ၀ီနာ က “သြော်… အဲဒါ ကျွန်တော် မနက်စာစားပီးပီလို့ ဆုိုလုိုတာပေါ့“ လုို့ခပ်ကြောင်ကြောင် မှတ်ချက်ချတာမျိူး လုပ်တယ်။
နောက်ဆုံးပြောစရာတစ်ခုကတော့ သူက လူတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် အသေးစိတ်မမှတ်မိတာ။ George Miller (ဂျော့မစ်လာ) (သူ့အကြောင်းအရင် အခန်းတွေမှာ ဖော်ပြပီး။ အမေရိကန် စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦး၊ စိတ်ပညာဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့သူ) က “ကျွန်တော် ၀ီနာ နဲ့ တဒါဇင်လောက်တွေ့ဖူးတာကုို သူက ကျွန်တော့်ကုို တွေ့တိုင်း တစိမ်းတစ်ယောက်အဖြစ် သူက မြင်နေတာ“ လို့ ပြောပါတယ်။ မစ်လာက အမ်အုိုင်တီမှာ ၁၉၅၀ ကာလတွေမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ တခါတော့ ၀ီနာ နဲ့ သူ ၀ီနာ့ရုံးခန်းမှာ ဂျာနယ်လစ် တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပေးဖုို့ကိစ္စကြောင့် ဆုံကြတယ်။ ဂျာနယ်လစ်နဲက ၀ီနာဟာ တရုတ်ဘာသာနဲ့ အတုိုင်အဖောက်ညီပြောကြဆုိုကြတယ်။ ၀ီနာ ကသူ့ဖခင်ရဲ့ ဘာသာစကားလေ့လာမှုအမွေကုို ရထားတယ်လေ။ သူကိုယ်တုိုင် ဘာသာ ၁၃မျိူး တတ်ထားတယ်။ ၂မိနစ် ၃မိနစ်လောက်အကြာ ရုတ်တရက်ဝီနာ က မစ်လာဘက်ကိုလှည့်ပီး “ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ“ လုို့မေးတယ်။ မစ်လာ ကတော့ ဘာမှမပြောပဲ ထွက်သွားလုိုက်ပါတယ်။
၀ီနာက လူတွေရဲ့ အကြိုက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ သူက သူ့ပုံစံနဲ့သူ နံမယ်ကြီးတာ သချာင်္ဘာသာပညာရှင် တစ်ယောက်လုို လူသိများတာ။ ၀ီနာဟာ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သိပ္ဗံပညာဆုိုင်ရာ အငြင်းပွားမူတွေမှာ ငြင်းခုန်တတ်တယ်။ ဒါ့အပြင်သူ့မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆုိုင်ရာ တုိုက်ခုိုက်မူတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။ သူ့မိတ်ဆွေဟောင်း ပက်စီမာစာနီ ကပြောရာမှာ “ ၀ီနာ ဟာ ယဉ်ကျေးပီး အသည်းနှလုံး နူးညံ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ “ လုို့ဆုိုပါတယ်။ “ဒါပေမယ့် တခါတရံ သူ့မှာ စိတ်ထိခုိုက်လွယ်၊ စိတ်ပူပန်လွယ်၊ အတ္တနဲ့ခံစားချက် ပြင်းထန် သူတစ်ယောက်လုို တုန့်ပြန်တတ်တယ်“ ။
ခပ်တုိုတုိုဆက်ရရင် ၀ီနာ ဟာ ၁၉၄၀မှာ အမ်အုိုင်တီသချာင်္ ဆိုပီး ပုံစံပြောင်းပစ်လုိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ သည်တော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကန်ဘရစ်ဟာဖြင့် ထူးခြားတဲ့ ပုံစံသစ်နဲ့ တည်ရှိနေပြီး အလုပ်အကျွေးပြုနုိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။ လူတွေဟာ ၀ီနာ ရဲ့အကြံသစ်ဥာဏ်သစ် တွေကနေပြီး အတူတကွ ပြောဆုို ဆွေးနွေး အကြံပေး နေထုိုင် အသက်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။
စစ်အပြီးမှာ ၀ီနာ ရဲ့“စူပါဆွေးနွေးပွဲများ“ ဟာ ချက်ချင်းဆုိုသလို ဆင်နွဲခဲ့တယ်။ “ညစာစားချိန် စကားလက်ဆုံ အချိန်ဟာဖြင့် အရောင်အသွေးစုံတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ တက်ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေဟာ စိတ်ဝင်တစား နဲ့စိတ်ပါလာကြတယ်“ လုို့ (ဂျယ်ရီဝက်စနာ) ကပြောပါတယ်။ ညစာစားပီးတော့ သူ (၀ီနာ) က သူ့အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပီး ဘယ်သူမဆုို ၀င်ရောက် ပြောဆုို ဆွေးနွေးဖုို့ အခုလုိုပြောတယ်။ အဲသည် အခွင့်အရေးပေးရတာဟာ လွယ်တော့မလွယ်ဘူး။
“စကားတွေကုို ခပ်တုိုတုိုပဲ ပြောကြဖုို့ မျော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောတဲ့သူက ပြီးအောင်ကြိုးစားပြီး ပြောနေချိန်အတွင်း ၀င်ရောက်ဖြတ်ပြောတာ၊ ဆွေးနွေးတာ၊ အငြင်းအခုန်လုပ်တာတွေလည်း ရှိနုိုင်ပါတယ်။ သည်တော့ တချိူ့အုပ်စုတွေလည်း ညသန်းခေါင်လောက်ကျ ထပြန်တာမျိူး ဖြစ်နုိုင်တယ်။ တခါတလေ အပြင်းအထန် ငြင်းခုန်မယ်၊ ဒီနေ့ပြီးရင်လည်း ပြီးနုိုင်မယ်၊ ပြီးချင်မှလည်း ပြီးမယ်လုို့ မြင်နုိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာဗျာ – ဒစ်ဂျစ်တယ်ကွန်ပြူတာတွေနဲ့ လူ့ဥနှောက် ကွဲပြားခြားနားမူတွေ အကြောင်း ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ မပြီးနုိုင်တာမျိူးပေါ့။”
ဟော …. လစ် …. (သည်စာအုပ်ရဲ့ ဇာတ်လုိုက်ဖြစ်တဲ့ လစ်ကလီဒါ၊ အခုမှ သူ့နံမယ် တွေ့ရပီ။) လစ် က စတီဗင်၊ မစ်လာတုို့နဲ့ တဖွဲ့တည်း၊ Psycho -Acoustics Lab ( စိတ်ပညာဗေဒ- ရေဒီယုိုအသံလှိူင်း ဓါတ်ခွဲခန်း ) ကသူတွေနဲ့အတူ သူလည်း အဲသည် ထဲမှာ ပါတယ်။ ဂျယ်ရီ ၀က်စနာ က လစ်ဟာ အဲသည်အုပ်စုထဲမှာ အရပ်ရှည်ရှည် ကလန်ကလားနဲ့၊ သူက အငြင်းလည်း သန်တယ် လုို့ အမှတ်တရ ပြောပြတယ်။ ကုိုကာကိုလာပုလင်းကုို လက်တစ်ဖက်က ကိုင်လုို့ သူ့ပုံစံက အခုထိ မျက်စိထဲ မြင်နေမိတုန်း။ လစ်က လူနဲ့ စက်ပစ္စည်းဆုိုတဲ့ ဆက်သွယ်ချက်တွေကုို သိပ်ကုို စိတ်ဝင်တစား စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်သူပါ။ သူကလည်း တခြားသူတွေလုိုပဲ ၀ီနာရဲ့ ဆွေးနွေးပြောဆုိုချက်တွေကုို သေချာ နားထောင်ပြီး လုိုက်ပါခံစားတတ်သူပါ။ သည်တော့ သူုတုို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်သွယ်ချက်က အဲသည်အမြင်တွေကြားထဲ နေမှာပေ့ါ။
“ခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့ နည်းပညာ ဟာ အဲသည်ခေတ်က အတွေးအမြင်တွေကုို ရောင်ပြန်ဟတ်ပါတယ်“ လုို့ ၀ီနာ ကစစ်ကြီးအပြီးမှာ ခပ်တုိုတုို မှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာနဲ့ ရှင်းအောင်ပြောရရင် ၁၇ရာစုနဲ့ ၁၈ ရာစု ကြား သိပ္ဗံပညာ တော်လှန်ရေးအတွင်းမှာ ဂါလီလီယုို၊ ကတ်ပါလာ၊ နယူတန် တုို့ဟာ ခေတ်သစ်သိပ္ဗံပညာရပ်ရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ်ကုို ချပေးခဲ့တယ်၊ ၁၇ ရာစု တွေးခေါ်ပညာရှင် ရနေးဒေးကား က အပင်တွေ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အတွင်းပုိုင်းတည်ဆောက်မူကုို တင်ပြပုံဖော်ပေးခဲ့တယ်။ တဖန် ၁၉ ရာစု စက်မူတော်လှန်ရေးမှာ နည်းပညာ ဆုိုတဲ့ အဓိပ္ဗါယ်သတ်မှတ်ချက် ဟာ ရေနွေးငွေ့သုံးအင်ဂျင်ကနေ အပူကုိုထုတ်ပီး စွမ်းအင်ထုတ်တဲ့ သဘောတွေ ပါလာတယ်။ အဲသည်လုိုနဲ့ သိပ္ဗံပညာရပ်ဟာ တဖြေးဖြေးနဲ့ ဇီဝဗေဒ၊ အပူဗေဒ၊ စက်မူဗေဒ ဆုိုပီး ပြောင်းလဲ တုိုးတက်လာတာ မျက်မြင်ပါပဲ။
အခု ၂၀ ရာစုမှာတော့ တဲ့ … ၀ီနာ ကဆက်ပြောပါတယ်။ တော်လှန်ရေးအသစ်တစ်ခုကို စဖုို့ လမ်းစကုို မြင်နေရပါပီတဲ့။ ဒါပေမယ့်တဲ့ ရေနွေးငွေ့ တုို့ဘာတုို့လုိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး တဲ့။ နည်းပညာ တုိုးတက်ပြောင်းလဲမူ လုို့သူက ခေါ်လုိုက်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်၊ အနာဂတ် ဆိုတာကုို လမ်းပြပေးမယ့် ၊ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သာမက၊ ကမ္ဘာကြီးကို ပါ တုို့ထိနုိုင်မယ့် နည်းပညာပါ တဲ့။ ခေတ်ကုို လမ်းပြပေးမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တစ်ခု တဲ့။ “ ကျူပ်တို့ပြောနေတဲ့ အဲသည် စက်ပစ္စည်းဟာ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ အနာဂတ်အတွက် မျော်လင့်ချက်ပေးနေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲသည်စက်ပစ္စည်းက အလုိုအလျောက် တွက်ချက်ပေးမယ်၊ အလျင်အမြန်ကုို တွက်ချက်ပေးမယ်၊ ဥပမာဗျာ … ဘယ်လုိုပြောရမလဲ…. စက်မှုနည်းပညာအသစ်ပေါ့။“
သူက “အဲဒါကုို အသိဥာဏ်မရှိတဲ့သတ္တ၀ါ လို့ပဲခေါ်ခေါ်၊ စက်ပစ္စည်းလုို့ပဲ ခေါ်ခေါ် ပေါ့၊ ခေါ်ချင်သလုိုခေါ်။“ လုို့သူက ဖြည့်ပြောလုိုက်ပါသေးတယ်။ ဆက်သွယ်ရေး၊ အဖွဲ့အစည်း၊ သတင်းအချက်အလက်၊ အရာဝတ္တု၊ စွမ်းအင်၊ လုပ်ဆောင်မှုစတာတွေဟာ အသက်မရှိတဲ့ အရာတွေပဲ လို့သူက ကောက်ချက်ချတယ်။ အဓိက ကတော့… အင်း…. ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်နဲ့ ထိမ်းချူပ်မှု …. သူ့စက်ပစ္စည်းက အဲသည်လိုမျိူး။ (အဲသည်တုန်းက သူပြောတာတွေ ဘယ်သူမှ နားလည်ပုံမရပါဘူး။ လစ် ကလွဲလို့ပေါ့။ အဲဒီဘာမှန်းမသိတာတွေကို သူက အကောင်အထည်ဖော်ပြမှာ။)
၀ီနာက သူ့စိတ်ကူးတွေကုို လစ်နဲ့ တခြားသော သူ့လို ကောင်တွေကုို တပျော်တပါးကြီး ပြောဆုို ရှင်းပြ နားထောင်ကြ။ အတိုချူပ်ပြောရရင် “အော်တုိုမစ်တစ် ကွန်ပြူတာ“ ဆုိုတဲ့ ယနေ့ခေတ် အရေးပါဆုံး ဖြစ်လာမယ့် စက်ပစ္စည်း ဆိုတာဆီကုို ဦးတည်သွားနေကြတဲ့ လမ်းတစ်ခုကုိုဖောက်နေကြတာ ဖြစ်မှာပေါ့။ အဲသည်နည်းပညာကို ၁၉၂၅ခုနှစ်တွေကတည်းက နေစလုို့ ၊ အမ်အုိုင်တီမှာ သူ့စိတ်ကူးတွေကုို အကောင်အထည်ဖော်လုို့၊ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာဌာနက ပါမောက္ခ Vannwvar Bush (ဗာနက်ဗာ ဘွတ်ခ်ျ) နဲ့ သူတုို့တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖုို့ ဖြစ်လာတယ်။
(အဲသည်မှာ မစ်ဇူရီကကောင်ကလေးများ အခန်း အဆုံးသတ်ပါတယ်။ မစ်ဇူရီကကောင်ကလေးများ Missourri Boys ဆုိုတဲ့အခန်းတစ်ခုလုံး ပီးပါပီ။ နောက်တစ်ခန်းကုို ကူးပါမယ်။ သည်တော့ စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်ဘာသာပြန်မယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရင် ကောင်းသလိုပေါ့။ )